Gobolka Norrbotten waa gobolka ugu weyn uguna xiga dhanka waqooyi ee wadanka Iswiidhan oo dhan waxuuna ka kooban yahay 14 degmadood. Waa gobolka kaliya oo xuduud la leh laba wadan- Noorweey iyo fiinland. Norrbotten waxuu leeyahay hanti dabiici ah oo badan oo isugu jiro keymo, biyaha iyo gododka macaadinata laga qodo oo eey ugu badan yihiin kuwa laga soo saaro biraha iyo macaadinta kale. Meeshaan waxaa waligeed deganaa dad dhaqamo kala duwan leh. Tusaale ahaan waxaa deganaay dadka iswiidhishka oo kasoo jeedo qowmiyadda saamerka, xuduuda u dhaxeeysa Findland waxaa ka jira dhaqanka isku dhex milmay ee iswiidhishfiinlaandeeska. Gobolka Norrbotten waa gobol wakhtiyada jiilaalka aad mugdi u ah wakhtiyada xagaagana qorraxda eey soo jeeddo illaa habeen barkii, waxuu leeyahay buuro dhaadheer, jaziirado yaryar, degaan miyi ah iyo magaalooyin waaweyn iyo dhaqamo badanoo kala duwan.
Shaqa bixiyayaasha ugu weyn ee gobolka waa maamulka caadfimaadka ee gobolka oo eey u shaqeeyaan 7 500, waxaa ku xiga shaqaalaha degmooyinka Luleå, Piteå iyo Boden. Shaqa bixiyaha ugu weyn ee dhinaca shirkadaha gaarka loo leeyahay waa LKAB. SSAB waa mid ka mid ah shirkadaha biraha soo saaro kuwooda ugu weyn aduunka.
Gobolka waxaa ku yaal shan isbitaal: isbitaalka länssjukhuset Sunderby sjukhus i Luleå, Gällivare sjukhus, Kalix sjukhus, Kiruna sjukhus iyo Piteå Älvdals sjukhus. Waxaa ku yaal 34 rug caafimaad, badankood waxaa maamula maamulka caafimaadka ee gobolka, laakiin waxaa jira qaar gaar loo leeyahay, degmo kasta waxeey ugu yaraan leedahay hal rug caafimaad.
Gobolka Norrbotten waxaa ka jira guruub u xilsaaran howsha isdhexgalka dadka oo ka kooban maamulka gobolka, xafiiska shaqada, hey'dda laanta socdaalka, maamulka caafimaadka, Hela Sverige ska leva, shirkadaha, xafiiska ceymiska, kaniisada iswiidhishka, ururka isboortiska, Bildningsförbundet, bisha cas iyo Rädda Barnen iyo degmooyinka oo dhan. Guruubkaas waxuu ka doodaa qodobo muhiim u ah kor u qaadida arrinta is dhexalka dadka, waxuu abaabulaa dad ka shaqeeya, waana shabakad wax lagu kororsado. Qof kasta oo usoo guuro gobolka waxaa loo arkaa inuu yahay qof wax u taraya dhaqaalaha iyo horumarka gobolka.
Lunet söker Siteansvarig Fibertekniker/Optotekniker
Servitör / Servitris Servitör/Servitris
Thai Kock till Alcatraz Restaurang Kock, à la carte
Bogga 1 ee ka mid ah 47